Fiofanana Archives - Fiangonana FLM Orléans Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
“Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana.”
Akon’ny Fiofanana Komity FLM Orléans – 19 nov. 2016
Misaotra an’i Jesosy fa afaka niofana tany Tours ireo Komitin’ny Fiangonana ny Sabotsy 19 novambra 2016 lasa teo. Indreto sary vitsivitsy mahakasika izany.
Fiofanana Komity Fiangonana FLM Orléans – 19 nov. 2016, Tours
« Ary toy izany ihany koa ianareo: raha fatra-paniry ny zava-panahy, dia izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. » I Kor. 14:12 Ny andraikitry ny Komity dia tsy zavatra mora na mandeha ho azy. Misy toetra takian’ny fanarahana an’i Jesosy mantsy araka izay efa nolazainy tamin’ny mpianany: « Dia hoy Jesosy tamin’ny mpianany: Raha misy olona ta-hanaraka Ahy, aoka …
Hoy Jesosy: « … mianara Amiko … » Matio 11:29b. Ny Fileovana Marseille indray no handray ny fiofanan’ny mpampianatra Sekoly Alahady eto anivon’ny Synodam-paritany FLM Eoropa, ny sabotsy 12 sy alahady 13 novambra 2016 ho avy izao. Andrasana any Gemenos, toerana manokana handraisana ny fiofanana, ireto mpampianatra izay hanainga avy any amin’ny isam-piangonany avy. Manamarika ity fiofanana …
Perikopa 2020 (3)